देशको राजनीति देखेर चिन्ता नगर्ने नेपाली शायद नै होलान् । म पनि देशको चिन्ता गर्ने नेपालीमा पर्छु । नेताहरुको काम देखेर साह्रै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु । त्यो भन्दा पनि नेताको गुनगान गाएर नथाक्ने सदावहार कार्यकर्ता देखेर बेहोसी मै म बारम्बार बर्बराउछु । तर, मेरो बर्बराइको कुनै अर्थ नै छैन यहाँ किनकि सबै व्यस्थ छन् । आफ्नो–आफ्नो भागबण्डा नपाउने डरमा बिभिन्न ‘हत्काण्ड’ मच्चाउनमा पनि सबै ब्यस्त छन् । त्यही नाटक मध्यको एक मच्चन हो यो संसद् विघटन, त्यसपछि सुरु भएको विरोधको श्रृङ्खला अनि आरोप र प्रत्यारोप । यहाँ कोही कसैले देशको समृद्धिको लागि, जनताको दुखको लागि अनी रोजगारिको लागि लडेको छैन । यहाँ त पालो नपाएको झोकमा, पालो दिनुपर्ने डरमा अनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा खेलिएको अपराधमुलक राजनीतीक घोटलाको परिदृष्यको चारित्रिक वकलात मात्रै छ ।
किन म यती धेरै अलमल्लमा छु ? हामी खाली तै झुटको खेती गर्नेको समर्थनमा ताली बजाउँछौ । भोट हाल्छौं । अनि उनिहरुकै निम्ति एक आपसमा दुस्मनी कमाउँछौँ ? उनिहरुमा खास के विशेषता छ ? ताकी हामी उनिहरुकै गुलामी गर्न रुचाउँछौ ? किन नयाँ अनुहारलाई भोट हाल्दैनौं ? भोटको अर्थ के ? नराम्रालाई पराजित, राम्रालाई स्वागत गर्ने होइन र ? हुन त हामी आजित छौं, हराए पनि अर्को मार्गबाट सांसद् बनेकै छन् । तर, पनि अब हामी हार्नु हुन्न। फेरी अब धेरै नजायजहरुलाई आउँदो चुनावमा भोट हाल्नु हुँदैन । नयाँ, राम्रो, दक्ष, इमान्दर, खट्न सक्ने अनी जनताको दुख बुझ्नेलाई भोट दिनुपर्छ। आज खाएर सदा भोको हुनु भन्दा आज भोको भएर बाँकी जीवन राम्ररी खान पाइयोस भन्ने सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ । आज जति दुःख भए पनि बदमास, डाँका, दलाल , घुसखोरी, स्वार्थी, बिचौलिया, भ्रष्ट, दुष्ट अनी खराब नेताहरुलाई पराजित गरौं । त्यसमा नै तपाईं हामी सबैको भलाई हुनेछ। जब यो देशमा भ्रष्टहरुको अन्त्य हुन्छ, निशन्देह विकासको सुरुवात हुन्छ, भाईचाराको दिन सुरु हुन्छ, दुरदर्शी नेताको जन्म हुन्छ अनी तपाइ हाम्रो सुःखको दिनको उज्यालो प्रकाश छरिएर आँफै आउँछ।
हाम्रो देशमा यसरी राजनीति गरे, नेताहरुले जहाँ कसैको ठोस गन्तब्य छैन, कसैले आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गर्दैन, कोही पनि आफ्नो कामप्रति इमान्दारिताको वहन गरेका छैनन् । किनभने यहाँ राजनीति राजनीति मात्र रहेन । यहाँ त राजनीति भित्र सबैले देख्ने गरी बिकृति छ । यस्तो बिकृति छ कि यसलाई फाल्नको लागि सबै जनता एकजुट हुनु आवश्यक छ । अन्यथा यो राजनीति भित्रको बिकृति हटाउन पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पार्टीका नेताहरुलाई ‘बा–आमा’ नमानेर एउटा कम्पनीको स्टाफको रुपमा लिनु पर्‍यो, आफ्नो सेवकको रुपमा लिनु पर्‍यो, अनी समाजको, देशको र व्यवस्थाको निम्ति डटेर इमन्दारितको साथ बहादुर बनेर काम गर्दैन भने पार्टीबाट हटाउनलाई आन्दोलन गर्न सक्नुपर्‍यो ।
जब विकृति भित्र राजनीति हुन्छ, त्यसलाई सही दिशामा ल्याउन ठूलै बलिदानी दिनुपर्ने हुन्छ, धेरै नै मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ र कार्यकर्ताले देशकै लागि भए पनि पार्टीलाई बहिस्कार गर्नुका साथै नयाँ लक्ष र उदेश्यका साथ नयाँ पार्टीको स्थापना र कठोर सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प रहन्न । आजको नेपालको अवस्था यही हो, यहाँ राजनीति भित्र विकृति होइन विकृति भित्र राजनीति भाईरहेको छ ।
संसद् विघटन गरेर बहादुर हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावमा गरेका बाचा पुरा गर्न कहाँ–कहाँ प्रचण्डले तगारो हाल्यो ? उनले थालेको कुन परियोजनामा माधव कुमार नेपालले बिथोल्यो ? अनी कुन–कुन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर जेल चलान गर्यो ? विरोधीलाई क्रोधको हिलो छ्याप्ने काम मात्रै भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै, प्रचण्ड केपी ओलीले संसद् विघटन नगर्दासम्म उनले गरेका बिभिन्न ‘स्क्याण्डलहरु’को लागि किन सडकमा आएन ? किन उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएसम्म उ चुपचाप बसे ? के उमेरले राजनीति गर्ने होर ? किन तपाईं भन्दा म जेठो नम्बर १ अअध्यक्ष म भन्दा प्रचण्डले स्वीकार्यो ? नेता क्षमताको, दक्षताको, दुरदर्शिताको, निडरपनको आधारमा चुनिनु हुँदैन ? जे भए पनि जसो भए पनि आजको नेपालको राजनीति यि दुई नेताहरु कै वरिपरी घुमिरहेको छ । बाँकी सबै कसरी, कहाँ, किन र कहिले र कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा हतासिएका छन् ।
तर, नेपाली कांग्रेसको पारा देखेर पनि म छक्क पर्छु । किन उनीहरु दोधरमा छन् ? यो त प्रतिपक्षको लागि चुनावमा गएर जनताको मन जितेर सरकार बनाएर देशको सेवा गर्ने । खोइ त कांग्रेसको आट ? प्रतिपक्षमा हुँदा खबरदारी गर्न सकेन । चुनावको घोषणा हुँदा चुनाव नगरौं भन्छ । कांग्रेस पार्टी हो कि होइन शंका लाग्न थालिसक्यो । अन्य स–सना पार्टीहरु पनि चुनावको घोषणा हुँदा खुसी हुनुपर्ने तर, चुनावमा जानै मानिरहेका छैनन् । के उनिहरु पार्टी नै चलाउँदैछन् ?
ओली र प्रचण्ड एक–आपसमा ‘पावर सेयरिङ’ गर्न चाहँदैनन् । ओली र प्रचण्डबाहेक अहिलेको पेरिस्थितिमा अरु कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यो उसको क्षमताले होइन । यि दुईमध्येका एक कार्यकर्ता भएर प्रधानमन्त्री हुन्छ । तसर्थ, कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि थप अन्योलामा बस्ने कि चुनाव मै गएर सांसद् चुनेर अघि बढ्ने ?
अहिले विकृतिभित्र राजनीती भइरहेको छ । जगिरको अभिलाषामा, मन्त्री, हुने आशामा, देश समाज भुलेर एक आपसको स्वार्थ मुनी लाज पचाएर गाली गलौज गरिरहेछन् । सबै नेताहरुले बुझ्नु पर्‍यो, मनन गर्नु पर्‍यो कि यो विकृतिभित्रको राजनीतिले उनलाई क्षणीक फाईदा त पुग्ला तर, कालान्तरमा गएर पुस्तौं–पुस्ता दुःखको भूमरीमा रुमलिरहन्छन् । तसर्थ आजैबाट विकृतिको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर विकासको, उन्नतीको बाटो नेताहरु लागेको देख्न, सुन्न हेर्न पाइयोस् । यही शुभकामना छ ।
(रामभक्त राई, हाल बेलायत)